MacOS အတွက်မီးလျှံမီးလျှံမှောင်မိုက်ခြင်းကိုမည်သို့သက်ဝင်ရမည်နည်း ငါက Mac ပါ
Ignatius ခန်းမ | | Mac အတွက်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများ, လဲ tutorial
MacOS Mojave ရောက်ရှိလာချိန်တွင် Cupertino မှယောက်ျားများသည်နောက်ဆုံးတွင်သုံးစွဲသူများစွာနှစ်ပေါင်းများစွာတောင်းဆိုခဲ့သောအမှောင်စနစ်ကိုနောက်ဆုံးတွင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်အခုတော့ရရှိနိုင်ပါပြီ လူတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်သည်မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့သည် Mac ကိုပတ်ဝန်းကျင်အလင်းဖြင့်အသုံးပြုပါက၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သောအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အကယ်၍ Safari အပြင်သင် Safari ကိုပုံမှန်အသုံးပြုသည် (အကယ်၍ ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့) အကယ်၍ သင်မှောင်မိုက်သော mode ကိုသက်ဝင်ထားပါကသင်မည်သို့တတ်နိုင်သည်ကိုသိရန်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်။ Mozilla ဖောင်ဒေးရှင်းမှမီးလျှံမြေခွေးမှကမ်းလှမ်းသည့်အမှောင်ထုကိုဖွင့်ပါ။ ဒီဟာကိုဖွင့်ဖို့လိုက်နာရမယ့်အဆင့်တွေပါ။
ပထမ ဦး စွာ၊ ကိုနှိပ်ပါ အလျားလိုက်သုံးလိုင်း browser ရဲ့ညာဘက်အပေါ်ထောင့်မှာရှိပြီး browser ရဲ့ configuration options ကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။
နောက် ၀ င်းဒိုးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘရောက်ဇာ၏အောက်ဆုံးသို့သွားပြီးကိုနှိပ်ပါ themes များ.
ပြသသောအပေါငျးတို့သ options များအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ရမည် အမှောင်.
အဲဒီအချိန်မှာပဲ browser interface အနက်ရောင်အရောင်ပြသရန်ပြောင်းလဲလိမ့်မည် နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့နှင့်အတူရှိခဲ့သောရိုးရာအဖြူအစား။
Firefox ၏ပုံပန်းသဏ္configာန်ကိုပြုပြင်လိုပါကအမှောင်ထဲမှဆောင်ပုဒ်တစ်ခုတည်းကကျွန်ုပ်တို့အားမီးလျှံမြေခွေးပြုလုပ်ပေးခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းမှာအခြားအကြောင်းအရာများရှိသည် Firefox ကိုလူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ဆွဲဆောင်မှုအရှိန်အဟုန်ကိုပေးသော browser ၏ထိပ်တွင်အဆင့်နိမ့်ပုံရိပ်တစ်ခုထားရှိသည်။
လိုချင်ရင် အခြားသူများကိုပျော်မွေ့ပါ themes များကျနော်တို့ရုံကိုနှိပ်ပါ နောက်ထပ်အကြောင်းအရာများကိုရယူပါကျနော်တို့မှောင်မိုက် mode ကိုရွေးချယ်ထားသော Themes ခလုတ်ကိုအတွင်း၌တည်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မကြိုက်သည့်မြေပုံများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့မှောင်မိုက်ခြင်းနည်းလမ်းကိုယခင်ကရွေးချယ်ခဲ့သော Themes option အတွင်း၌တည်ရှိသောခလုတ်ကို Manage ရွေးခြင်းအားဖြင့်လည်းဖျက်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » macOS အတွက်မီးလျှံမီးလျှံမှောင်မိုက်ခြင်းကိုမည်သို့သက်ဝင်ရမည်နည်း
လာမယ့်အပတ်မှာဖြေရှင်းနိုင်မယ့် FaceTime ကိစ္စအတွက် Apple မှတောင်းပန်ပါတယ်